Glimpse no anaran'ny fork an'ny GIMP hanome azy anarana hafa | Famoronana an-tserasera
Glimpse no anarana vaovao an'ny GIMP hamahana ny olanao amin'ny anaranao
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Gimp
Glimpse no anarana vaovao ananan'ny GIMP ary izany dia tonga hamaha ny olana nananan'ity programa fanovana sary mahafinaritra ity hatrizay. Fandaharana iray antsoina hoe GIMP ary izany dia nisy hatrany ny firaisana ara-nofo, noho izany dia nidina izy ireo hiasa hanova ny anarana indray mandeha.
Una fitaovana fanovana malaza, fa ny anarany foana no tsy tiana indrindra. Ny anarana dia avy amin'ny fanafohezana ny fanodikodinana sary GNU ary teny foana io noho ny antony samihafa.
Ny nataon'izy ireo dia fork ny tonian-dahatsoratry ny GIMP ary miantso azy hoe Glimpse. Toy ny olona tsy maniry ilay zavatra ka manomboka manome fiainana vaovao ny iray amin'ireo programa manan-danja indrindra eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary.
Ny zavatra mahatsikaiky momba ny zavatra fanovana anarana dia amin'ny farany boboss lumy izy io, mpanoratra teknika Oracle izay nanome ny anarana ka manomboka miantso azy hoe Glimpse isika izao. Izany rehetra izany dia avy amin'ny lahatsoratra nosokafan'ny developer Christopher Davis tao amin'ny Gitlab antsoina hoe "Mihevitra ny lazany ho an'ny GIMP izay tsy dia manafintohina loatra."
Mahita an'izany Ny hevitr'i Davis momba ny fanovana anarana mihoatra ny ady hevitra, nanapa-kevitra i Moss fa hamorona ny fork miaraka amin'ny tetikasa Glimpse. Nanazava i Moss fa i Glimpse dia tsy ny manasitrana ilay anarana mampalahelo ihany, fa mametraka ihany koa ny sain'ilay endriny vaovao amin'ny interface GIMP.
Izahay koa Handeha amin'ny dingana vaovao sy ny fivoaran'ny GIMP isika mba ho Glimpse ary noho izany dia apetraho mandritra ireo taona maro izay ny teny hoe "gimp" dia azo ampiasaina amin'ny fomba manafintohina amin'ny kolontsaina hafa. Tsarovy fa ny GIMP sy ny Glimpse dia eo amin'ny tranonkala samihafa ary ny developer Glimpse dia hanohy handray anjara amin'ny kaody GIMP tsy misy fifanarahana.
El Tranonkala fahitana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Glimpse no anarana vaovao an'ny GIMP hamahana ny olanao amin'ny anaranao
Yllelder dia hoy izy:
Inona no dikan'ny hoe manafintohina amin'ny kolontsaina hafa ny GIMP?
Mamaly an'i Yllelder
Aza adino ny iray amin'ireo hitsin-dàlana fitendry malaza amin'ny Adobe CC amin'ity modely ity
Ity dia sary famantarana Apple vaovao mareva-doko iray vaovao, santatra ho an'ny keynote iPhone 11